Mohamed Gure oo Borlänge ka laabtay si uu wasiir uga noqdo Somalia | Somaliska
Mohamed Gure oo Borlänge ka laabtay si uu wasiir uga noqdo Somalia
Mohamed Gure oo Sweden soo galay sanadkii 2009 ayaa ka mid-noqday xubnihii loo xushay in ay ka mid noqdaan wasiirada maamulka Galmudug ee Somalia. Gure oo dhawaan ka mid ahaa gudi wasiiro ah oo maamulkaasi ka socday oo soo gaaray Sweden ayaa dib ugu laabtay magaalada Borlänge isaga oo u waramay wargeyska Dalarna Tidning.
Gure ayaa sheegay in sababta ay u yimaadeen Sweden in ay tahay in ay wax ka bartaan nidaamka siyaasada iyo maamulka ee Sweden qaasatan magaalada Borlänge oo Soomaali badan ku nooshahay.
“Waxaan nahay maamul cusub oo waxaan doonaynaa in aan barano sida nidaamka Sweden u shaqeeyo oo waxaan u baahanahay aqoon” ayuu yiri Mohamed Gure oo ah wasiirka Shaqada iyo Dib u dhiska ee Galmudug.
Maadaama uu familkiisa wali ku noolyahay Borlänge ayaa wax laga waydiiyay sida uu isugu keeno in uu Somalia wasiir ka yahay iyo familkiisa. Waxa uu sheegay in ay tahay arin adag balse uu dhowrkii biloodba mar uu soo booqdo qoyskiisa. Balse waxa uu dib ugu laabtay wadankiisa in uu ka qeyb qaato dib u dhiska iyo horumarinta maamulka.
Maamulka Borlänge ayaa sheegay in ay ogolaasho ka heleen Wasaarada Arimaha dibada Sweden in ay qaabilii karaan wafdiga Galmudug maadaama ay yihiin wafdi ka socda wadan kale oo arimahaas ay maamusho wasaaradaasi. Maamulka Borlänge ayaa sheegay in ay aad uga farxeen booqashada wafdiga Galmudug maadaama ay Soomaali badan ku noolyihiin degmadaas.
Mohamed Gure ayaa ka mid ah xubno badan oo ka tirsan dowlada Somalia iyo maamul-goboleedyada oo ka laabtay qurbaha si ay uga qeyb-qaataan siyaasada iyo dib u dhiska Somalia.
Sual kaliya aan wato ayaa ah sidee migrationverket ku ogolaatay qof an wali citizen qaadanin 2009 swedan so galay asigoo swedan wali qaxooti främlingspass ku ah inoo maamul iyo dowlad matalo dina maloo fiiriyay qawiil ka oo u sheektay markuu sharci doon ahaa iyo hada qawiil ka uu matalaayo oo galmudug….. waa xaqiiqo jawab u baahan lkn dad badan ka xanaaqi doonanaa qofkii wax garad ahna ila fahmi doona
Fikrad lala dhacay 10 4
February 26, 2016 at 18:29
Ahmed Dirie oo ku nool dalka Sweden. Aniga waxay ila tahay in qof masuul nimo sheganayo laga hadlayo oo waliba aad u so gudbinesaan oo aad baresaan qofka uu yahay in ee aheed muhim in aad ka shekesaan waxa uu ahaan jiray ileen 2009 uun ma eesan bilabanin taariqdisa. Mida labaad muxuu ahaay 2009 ka dib marka uu qaxotinimo ku nolaay Sweden. Mise wa uun hala baro dadka oo ha laga dhigo qof la yaqano miyaa shekadu?
February 26, 2016 at 20:54
aniga waxay ila tahay ninkaan jimcaale wakhti wuxuu u baahan yahay siminaar saxaafada ah weli waxaa iskaga xaldan mowduuc iyo war ilaah idinku dhaarshee waxaas war ma laga dhigi karaa webkaan waxaan uga baraney wararka inuu noo fasiro runtii maqal iyo war ha kala fahmi teeda kale macquul ma tahay qof aan weli sitiidan qadan isku dhiibey inuu somaliya ka soo cararey inuu hadana ku laabto o cil ka qabto waxaan u maleynayaa warkaan markii la qoraayey garaabo badan la soo cuney murqaan aan loo mel dayin dhibkaan ayuu leeyahay ka xaaxaabi hee
February 27, 2016 at 17:29
walaal waa wiilka magaca guruxda badanleh waa mahamede su, aal ayaan ku weydiinayaa igana raali noqo ma kula fiicantahay in adigoo webbka ku tixan in aad ninkii wax soo qoraayey ad aflagaadeyso iyadoo ciwaan looga dhigay aflagaado iyo qabyaalad waa ka mabnuuc webka?
Axmed Lucky says:
March 1, 2016 at 09:58
Asc dhammaantiin. Waxaan jeclaan lahaa in la fahmo in aanay waajib ahayan in uu qof ku noqdo citizen Swedish ah si uu u noqdo masuul Soomaaliyeed. Qofku isaga oo masuul ka ah maamulada ka jira Somaliya ayuu imaan karaa wadamada yurub ka dibna uu magan galyo waydiisan karaa isagoo runta ka sheegaya ama beenba ka sheegaya sababta ka keenty Somaliya. Mana jiro qof inta uu dal magan galyo waydiisto hore laga siiyo Citizen. qofku waxa kale oo uu ku iman karaa yurub siyaabo kala gadisan tusaale ahaan family ayaa u dacwoon kara sida xaas ama ilmo isagoo deegaankisa iyo qabiilkiisuba ay sax yihin. Marka khasab maaha inuu qofku hal wado ku yimaado yurub oo ah inuu been ka sheego degaan kiisa iyo qablii kiisaba. Markaa dadka qoraalada iga horeeyay so qoray waxaan leeyahy way jiraan masuliyiin badan oo aan ahayn citizen wax isku xidhi karaa labadaa arrimoodna ma jirto ee si fiican ha loo fekero oo eedaynta badan ha la joojiyo Soomaaliyeey.